Saturday November 16, 2019 - 19:30:38 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Markii ugu horraysay madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in wax dambi ah aan loo qabsan karin askar iyo saraakiil American ah oo dambiya dagaal ka geystay dalka dibaddiisa gaar ahaan wadamada islaamka.
Donald Trump ayaa magaalada Washington ka sheegay in cafis loo fidiyay illaa sedax sarkaal oo ku eedaysnaa in ay dad shacab ah ku laayeen wadamada Afghanistan iyo Ciraaq oo duullaanno ay ku qaadeen sanadadii 2001 iyo 2003.
Wax badan 200 oo sanadood ayuu sheegay in maamulayaasha Mareykanka ay ihaanaynayaan melleteriga wadankiisa oo uu sheegay in ay qabteen adeegyo ay ku mutaysan karaan in lagu karaameeyo, wuxuu aad udhaliilay tabbooyinka dambiyo lagulasoo oogayo saraakiishii dadka ku gummaaday ciraaq iyo afghanistan.
Afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhiga mareykanka ayaa soo dhoweeyay tallaabada Trump uu qaaday oo ay ku sheegeen in ay qayb ka tahay cadaaladda madaxweyne ee dhanka melleteriga.
Trump ayaa sheegay in uu darajadiisi ciidanimo usoo celinayo Clint Lawrence oo ah sarkaal dad ku laayay dalka Ciraaq halka cafis buuxa ay heleen Matthew Golstein iyo Edward Gallagher oo ku eedaysan in ay shacab rayid ah si ula kac ah ugu laayeen Afghanista iyo ciraaq.
Kumanaan kale oo kamid ah askarta Mareykanka ayaa ku eedaysan in ay dad shacab ah ku dileen dalka ciraaq waxayna ubadantahay in askartaas iyana aan wax dambi ah loo raacan doonin.
Donald trump ayaa ah hoggaamiye cunsuri ah oo uu ku fogaaday islaam naceybka waxayna isku xibsi yihiin G.W Bush madaxweynihii hore ee mareykanka oo hoggaaminayay dullaanadii lagu qaaday wadamada Ciraaq iyo Afghanistan.